Akụkọ Bible: Daịna Abanye ná Nsogbu - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀NA-AHỤ ndị Daịna na-eje ileta? Ọ na-eje ịhụ ụfọdụ ụmụ agbọghọ ndị bi n’ala Kenan. Nna ya Jekọb ọ̀ ga-enwe obi ụtọ banyere nke a? Iji nye aka ịza ajụjụ nke a, lee ma ị ga-echeta ihe Ebreham na Aịzik kwuru banyere ndị inyom Kenan.
Ebreham ọ̀ chọrọ ka Aịzik nwa ya lụrụ nwa agbọghọ Kenan? Ọ chọghị. Aịzik na Ribeka hà chọrọ ka Jekọb nwa ha lụrụ nwa agbọghọ Kenan? Ee e, ha achọghị. Ị̀ ma ihe kpatara ya?
Ọ bụ n’ihi na ndị Kenan na-efe chi ụgha ofufe. Ha abụghị ezigbo ndị e kwesịrị inwe dị ka di ma ọ bụ nwunye, ha abụghịkwa ezigbo ndị e kwesịrị inwe dị ka ndị enyi. O doro anya na Jekọb enweghị obi ụtọ na nwa ya nwaanyị na ụmụ agbọghọ ndị Kenan ndị a bụ enyi.
N’ezie, Daịna bara ná nsogbu. Ị̀ na-ahụ nwoke Kenan nke na-ele Daịna anya na foto a? Aha ya bụ Shikem. Otu ụbọchị, mgbe Daịna jere ileta ndị enyi ya, Shikem duuru ya wee dinaa ya n’ike. Nke a adịghị mma n’ihi na ọ bụ naanị ndị ikom na ndị inyom bụ́ di na nwunye kwesịrị idinakọ. Ihe ọjọọ a Shikem mere Daịna kpatara nsogbu ndị ọzọ.
Mgbe ụmụnne ndị ikom nke Daịna nụrụ ihe merenụ, ezigbo iwe were ha. Mmadụ abụọ n’ime ha, Simiọn na Livaị, were ezigbo iwe nke na ha weere mma agha ha jee n’ime obodo ahụ ma nweta ndị ikom ahụ na mberede. Ha na ụmụnne ha gburu Shikem na ndị ikom ndị ọzọ niile. Jekọb were iwe na ụmụ ya mere ihe ọjọọ a.
Olee otú nsogbu a niile si malite? Ọ bụ n’ihi na Daịna metere ndị na-adịghị ege iwu Chineke ntị enyi. Anyị agaghị achọ ime ndị dị otú a enyi, ànyị ga-achọ?
Gịnị mere Ebreham na Aịzik achọghị ka ụmụ ha lụọ nwaanyị n’ala Kenan?
Jekọb ọ̀ kwadoro ka nwa ya nwaanyị mete ụmụ agbọghọ ndị Kenan enyi?
Ònye bụ nwoke a nke na-ele Daịna anya na foto a, oleekwa ihe ọjọọ o mere?
Gịnị ka ụmụnne Daịna bụ́ Simiọn na Livaị mere mgbe ha nụrụ ihe merenụ?
Jekọb ọ̀ nabatara ihe Simiọn na Livaị mere?
Olee otú nsogbu niile nke ezinụlọ a si malite?
Gụọ Jenesis 34:1-31.
Mkpakọrịta nke Daịna na ụmụ agbọghọ Kenan ọ̀ bụ ihe mere otu ugbo? Kọwaa. (Jen. 34:1)
Gịnị mere ụta ji dịtụrụ Daịna maka ịghọ nwa agbọghọ maara nwoke? (Gal. 6:7)
Olee otú ndị na-eto eto taa pụrụ isi gosi na ha mụtara ihe site n’ihe mere Daịna? (Ilu 13:20; 1 Kọr. 15:33; 1 Jọn 5:19)